Mifantoha amin'ny orinasa mpamokatra entana, tamin'ny laser-tsaina
Lalina ho orinasa malefaka vahaolana amin'ny famokarana tamin'ny laser teknolojia
Golden tamin'ny laser - Izao tontolo izao-malaza tamin'ny laser marika ny mpanamboatra fitaovana.
18 taona mivoatra hatrany ny traikefa ao amin'ny orinasa tamin'ny laser.
Customization be pitsiny noho ny fahaizany manokana fampiharana orinasa.
Wuhan Golden Laser Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2005 sy voasoratra ao amin'ny Enterprise Fitomboana Market ny Shenzhen Stock Exchange ny taona 2011. Izany dia fampiharana ny teknolojia dizitaly tamin'ny laser vahaolana Ilaintsika sy ny fanomezana nataony tamin'ny laser fanodinana vahaolana ho an'ny mpampiasa manerantany.
Taorian'ny 10 taona mahery ny mitohy fampandrosoana sy ny zava-baovao, Golden Laser no lasa Shina fitarihana sy izao tontolo izao-malaza tamin'ny laser mpanamboatra ny fitaovana. Eo amin'ny sehatry ny farany ambony-fitaovana dizitaly tamin'ny laser orinasa mpamokatra entana, volamena tamin'ny laser dia nanorina ny nitarika ny teknolojia sy ny marika tombontsoa. Indrindra fa eo amin'ny sehatry ny lamba, akanjo sy lamba malefaka orinasa tamin'ny laser fangatahana, volamena tamin'ny laser no lasa nitarika Shina marika.
Hifantoka amin'ny fanomezana nomerika, mandeha ho azy sy ny manan-tsaina tamin'ny laser fampiharana vahaolana.
- Fanampiana rafitra nentim-paharazana orinasa famokarana hanatsarana ny nomerika, malefaka noho ny zava-baovao fampandrosoana.
Volamena tamin'ny laser dia manokana ao amin'ny R & D, famokarana sy fivarotana ny CO2 tamin'ny laser fanapahana milina ,galvanometer tamin'ny laser milina ary fibre tamin'ny laser fanapahana milina . Ny tsipika vokatra manarona mihoatra ny 100 modely toy ny tamin'ny laser fanapahana, tamin'ny laser sokitra, tamin'ny laser manamarika, tamin'ny laser perforating, sy tamin'ny laser tetezana.
Applications nomerika ahitana fanontam-pirinty, lamba, akanjo, kiraro hoditra, orinasa lamba, furnishing, dokam-barotra, marika fanaovana pirinty sy fonosana, elektronika, fanaka, ravaka, vy fanodinana orinasa sy ny maro hafa. Maro ny vokatra sy ny teknolojia efa nahazo Patents-pirenena sy ny zon'ny mpamorona rindrambaiko, ary taona sy FDA fankatoavana.
Hatramin'ny taona 2000
Sales vola miditra IN 2017
Smart Factory tsaina Atrikasa
Tao anatin'ny am-polony taona, Golden Laser nandray tsara ho any an-tsena famokarana fitakian'ny manan-tsaina. Mampiditra ny anatiny loharanon-karena ao amin'ny orinasa, ka hanambatra ny teknolojia vaovao mba hamoronana vahaolana fitantanana ny atrikasa manan-tsaina. Tamin'ny fotoana fanatanterahana famokarana manan-tsaina, tsy hanahirana anao ihany koa ny mitondra ny tena amin'ny fotoana famokarana angona soritry mahay, tena andro miovaova, tena-ny fanaraha-maso, hampihena tsikelikely olombelona manatsara-tsehatra raha vokatra tsara sy ny fanaterana ny fotoana, tsy hanahirana hitondra bebe kokoa ny fitantanana.
Miandrandra ny ho avy, Golden Laser dia manaraka foana ny orinasa fandrosoana toy ny mpitarika fampandrosoana tetikady, foana hanamafy ny teknolojia fanavaozana, fitantanana zava-baovao sy ny fivarotana zava-baovao ho toy ny fototry ny fanavaozana rafitra, ary mikendry mba ho ny mpitarika ny manan-tsaina, mandeha ho azy sy nomerika tamin'ny laser fampiharana ny vahaolana.
Ao amin'ny tsena any ivelany, Golden Laser dia nametraka matotra fanompoana barotra Network any amin'ny tany maherin'ny 100 amin'ny firenena sy ny faritra manerana izao tontolo izao.
- Golden Laser efa lasa ny lehibe indrindra tamin'ny laser mpanondrana ny vokatra any Shina.
Ny sasany amin 'mpanjifa
Fa ny asany mahagaga TEAM'VE nandray anjara tamin'ny NY mpanjifa!
INONA NO LAZAIN'NY Clients?
"Michelle, manan vaovao sakafo momba volamena tamin'ny laser. Ary manana tsara kokoa ekipa. Joe sy Johnson dia tena matihanina sy mahay. Izy ireo hahatakatra ny fangatahana sy ny valiny ara-potoana sy assertively. Arahabaina! Mazava ho azy ianao koa tena matihanina sy hahatakatra ny vokatra sy hivarotra be dia be. "
"Rita, Toy ny mahazatra ny mpanjifa no tsara. Ianao ry zalahy efa lehibe sy mandrakizay raha mila manàla ilay trigger ianao dia ho voalohany antso."
"Ny Galvo tamin'ny laser milina manana setroka tsara indrindra, mba hanapaka na manoratra (marika) dia tena mafy, ny famolavolana ny milina tsara, dia mampiseho tsara milina fampisehoana, mora ny miasa, mora ny hanao fanitsiana."
"Ny milina dia tsara indrindra izany. Mr. Robin no tsara. Isika tia miara-miasa aminy. Very manampy sy tony. Tiako tsy ho ela levitra milina vaovao, ary hampifaly amin'ny manaraka dia tsy hanova ny teknisianina. Manantena hahita fifandraisana bebe kokoa amin'ny hoavy."